Nutrition – Page 12 – Healthy Life Journal
ရေခဲမုန့်ရဲ့ အာဟာရတန်ဖိုး . . .
မေး။ ။ ရေခဲမုန့်စားရင် ဘယ်လို အာဟာရရရှိနိုင်ပါသလဲ။ ဦးဗညား၊ တွံတေး။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။ ။ ရေခဲမုန့်မှာ အာဟာရဓာတ်ကတော့ ပါဝင်မှုသိပ် မရှိပါဘူး။ ကယ်လိုရီကတော့ ရေခဲမုန့် တစ်ခွက်မှာ ၁၂၀ ကယ်လိုရီလောက်...
ကျောက်ကပ်ဝေဒနာရှင်များနှင့် အာဟာရ (၂)
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) စားသောက်မည့်အစားအသောက်တိုင်းတွင် အစားအစာတစ်အုပ်စီမှ မှန်ကန်သောအချိုးအစား ပါဝင်သင့် – ထမင်း ဒါမှမဟုတ် ကစီဓာတ်ပါတဲ့အစာ၊ – အသား ဒါမှမဟုတ် အသားဓာတ်ပါတဲ့အစာ၊ – အဆီဓာတ်ပါတဲ့အစာ၊ – ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ – သစ်သီး၊ –...
ကျောက်ကပ်ဝေဒနာရှင်များနှင့် အာဟာရ (၁)
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ကျောက်ကပ်၏ လုပ်ငန်းများ ကျောက်ကပ်ရဲ့ အဓိကလုပ်ငန်းက ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းက စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို ပြင်ပသို့ စစ်ထုတ်ပေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့တိုင်း ရေတစ်လီတာခွဲလောက် ဆီးသွားနေပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက သွေးထဲကို pH ၇ ဒသမ၄ ရှိအောင်...
ဆိတ်ဦးနှောက်၊ မျောက်ဦးနှောက် စားသင့်သလား ..
မေး။ ။ ဆိတ်ဦးနှောက်၊ မျောက်ဦးနှောက်တွေက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပါသလား။ တချို့တွေက ရေနွေး ဖျောပြီး မကျက်တကျက်စားတာ တွေ့ဖူးလို့ပါ။ သဲယုမေ၊ လက်ပံတန်း။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။ ။ ဆိတ်ဦးနှောက်၊ မျောက်ဦးနှောက်တွေက ကျန်းမာရေးနဲ့...
ကိုယ်အလေးချိန် ငါးပေါင်လျော့ကျချင်တိုင်း အာဟာရပညာရှင်တို့ ပြုလုပ်လေ့ရှိသည့် အလေ့အထများ
စူး ( ဆေးဝါးတက္ကသိုလ် ) ကိုယ်အလေးချိန် ငါးပေါင်ခန့် လျော့ကျချင်တဲ့အခါ အာဟာရပညာရှင်တွေက အောက်ပါအလေ့အထတွေကို ပြုလုပ်လေ့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အစားအသောက်စာရင်း ရေးမှတ်ခြင်း တစ်နေ့တာအတွင်း ဘာစားသောက်တယ်ဆိုတာ ရေးမှတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းက ဘယ်အစာကို လျှော့သင့်တယ်ဆိုတာ သိသွားစေပါတယ်။ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယား သို့မဟုတ်...
အကြိုက်ဆုံး အစာများကို စားသင့်သည့် အကောင်းဆုံး အချိန်
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) တချို့အစာတွေကို တစ်နေ့တာရဲ့ သင့်တော်တဲ့ အချိန်တွေမှာစားပေးရင် ကျန်းမာရေးအတွက် အ ကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ချောကလက် – နံနက်စာ နံနက်စာမှာ ချောကလက်အနည်းငယ် စားပေးရင် ခန္ဓာကိုယ်ကို အင်တီအောက်ဆီးဒင့်ရရှိစေပြီး အိုမင်းမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်၊ နှလုံးကျန်းမာစေပါတယ်။...
ကြွက်သားထုထည် သန်စွမ်းစေမည့် အစားအသောက် ခုနစ်မျိုး
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ အားကစားခန်းမကိုမသွားခင်မှာ ကြွက်သားထုထည်သန်စွမ်းဖို့နဲ့ ဝမ်းဗိုက်ချပ်ရပ်နေစေဖို့အတွက် အာဟာရပြည့်ဝအောင် စားသင့်ပါတယ်။ ကြွက်သားကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ ကယ်လိုရီ၊ အရည်၊ ပရိုတင်းဓာတ်နဲ့ ကြွက်သားသန်စွမ်းစေမယ့် အလေးမလေ့ကျင့်ခန်းစတာတွေက အရေးပါနေပါတယ်။ (၁) ဥအမျိုးမျိုး အစားအစာလမ်းညွှန်ချက်မှာ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥလိုဥအမျိုးမျိုးကို တစ်နေ့တစ်လုံး...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) အာဟာရဖြစ်စေတဲ့ အစားအစာအုပ်စုမှာ အဓိကကတော့ သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ ဒီအစာအုပ်စုသုံးခုက လူတွေကို အာဟာရဖြစ်စေပါတယ်။ – ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်(ကစီဓာတ်) ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်တွေဖြစ်တဲ့ ထမင်း၊ ပြောင်း ဖူး၊ ခေါက်ဆွဲ စတာတွေက အာဟာရဖြစ်စေပါတယ်။ – ပရိုတင်း...
သားသားကို အရပ်ရှည်စေချင်တယ် . . .
မေး။ ။ သားသားက ၁၀ နှစ်ရှိပါပြီ။ အရပ်ရှည်စေချင်လို့ အစာတွေ အများကြီးကျွေးတာ လူကြီးတစ်ယောက်ထက်တောင် ပိုစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရပ်မရှည် ဘဲဝပဲ ဝလာပါတယ်။ ကျွန်မ ဘယ်လို ရွေးချယ်ပြီး ကျွေးသင့်ပါသလဲ။ နီလာနွယ် (FB) ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ...
မွေးမေမေတို့ အာဟာရပြည့်ဖြိုး အလှတိုးစေရန်
ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မိခင်စိတ်အပြည့်ဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် လူနာတစ်ယောက်ကို ကြည့်ပြီးတိုင်း ဘာတွေဆောင်ရမယ်၊ ဘာတွေရှောင်ရမယ် စသဖြင့် ဆရာတို့က ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဆေးရုံတွေမှာ မိခင်တွေက အများကြီး၊ ဆရာဝန်က တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်တော့ အကုန်လုံးကို စုံလင်အောင် ပြောဖို့...